Faraantiyo la shiilay oo qorfe leh | Cunnooyinka jikada
Giraanta tufaaxa qorfe, macmacaan deg deg ah
Way igu adag tahay inaan iska caabiyo macmacaanka tufaaxa. Daamanka, buskudka, macmacaanka macaan, muufada iyo diyaargarowga kale ee ka kooban maaddadan ayaa ka mid ah kuwa aan jeclahay. Hadday kugu dhacdo adiga oo kale, ha joojin tijaabinta kuwan siddo tufaax la shiilay, waad la yaabi doontaa fudeydkiisa iyo, dabcan, dhadhankiisa.
In macmacaan lagu diyaariyo 15 daqiiqo gudahood ayaa suurtagal ku noqon kara cuntadan. Ka dib markaan arkay iyaga oo tifaftiran daabacaad Mareykan ah, waxaan u degay ganacsiga waxaanan go'aansaday inaan aamin u noqdo cuntada asalka ah ama ku dhowaad. Waxaan go aansaday inaan ku daro wax yar qorfe qoraxda sonkorta ee siddooyinkan tufaaxa ah. Yaan waqti u helin inuu sidan macmacaan u sameeyo?
3 tufaax cas
¼ qaado yar oo khamiir ah
⅛ qaado yar oo milix ah
1 koob oo caano fadhi ah
Waxaan ku dhex qasnaa baaquli bur, cusbo iyo khamiir.
Weel kale, garaac ukunta iyo caano fadhi. Marka isku darku yahay mid isku mid ah, ku dar isku dar burka oo si fiican u walaaq illaa inta laga helayo cajiinka cufan iyo kuwa isku mid ah.
Waxaan diirnaa tufaaxa iyo waxaan googooyay siddooyin aan ka dhumuc weyneyn 1 cm. Xaqiiqdii, ma noqon doonaan buurbuur illaa aan ka baabi'inno qalbiga mid kasta oo ka mid ah; Waxaan ku sameeyay mindi yar.
Waxaan ku soo bandhigeynaa siddooyinku isku darka, si fiican ayaan u xoqnay ka dibna waxaan ku shiilnaa saliid kulul, laba daqiiqo dhinac kasta. Ma danaynayno in saliidu aad u kululaato ama dhaqso ayey u bungaari doontaa.
Ugu dambeyntii welina kulul, waanu ku dhufanaynaa isku dar ah sonkor iyo qorfe dhadhamin.
Shaqadu waa wax lagu farxolaakiin ma ahan cimilo xun ka dib, qabow sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Postres » Giraanta tufaaxa qorfe, macmacaan deg deg ah
Lila iyo cuntadeeda dijo
Taasi waxay umuuqataa mid aad u macaan!
Uma seego midkaan, ugu dhakhsaha badan ayey ugu dhacdaa jikaddayda waana hubaal
Ka jawaab Lila iyo cuntadeeda
Waa hab fudud oo fudud oo dhakhso badan oo macaan leh oo ay adag tahay in la iska caabiyo! Waad ii sheegi doontaa haddii aad jeceshahay natiijada 😉
Ku jawaab Maria Vazquez
Waad ku mahadsantahay cuntada sida loo kariyey, waxaan ka dhigan doonaa ficil ahaan 🙂
Cunto tufaax la shiilay
iyo khamiirka markii lagu daro
Ku jawaab france
FIKRAD AAD U FIICAN OO LA LEH FURANADA tufaaxan ee macaan, AYAAN KU DARAN DOONAA LACAGTA QOLKAYGA
Jawaab IVONNE SOLEDAD GUERRA H
Imtixaanka ayaan galin doonaa laakiin waxaa laga yaabaa in xoogaa isbedel ah aan sameeyo si aan uga dhigo mid caafimaad qaba muxas waad mahadsan tahay!
Ku jawaab Gaby muñoz
Waxaan noolaa ilaa soddon soddon sanadood .. markaan yaraa hooyaday ayaa karinta karinta ku sameysa galabtii galabtii…. Waan jeclahay iyada !!!! iyo markay qabow yihiin, ku raaci jalaatada vanilj… Mmm waxay dareemeysaa wanaag !!!
gaaban yasna dijo
Ku habboon maalmaha jiilaalka…
Ku jawaab yasna chaparro
Waan jeclahay cuntooyinka. Waxay hodan yihiin oo fudud.
Jawaab Gldys Lopez
Tartano farmaajo iyo macaanka strawberry
Rooti lowska lagu dubay yaanyo iyo jiis Emmental